Idabi elingunaphakade noluhlu lukaPen Heine 'lwePensile vs Ikhamera' Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umlo weTitans kuthotho lukaPen Heine 'lwePensile vs Ikhamera'
Ndikhumbula xa ndandifunda e-ESDIP ngo-2002 xa sasinika i-3D nge-3D Studio Max, ukuba babesekhona abanye abafundi ababefunda mathidala kancinci kwi-3D oopopayi Kwaqala ukubonakalisa ukuba injani unanamhla.
Omnye Idabi phakathi koopopayi bendabuko kunye nedijithali Ingadluliselwa nakwintoni na ukufota kunye nephepha njengakolu ngcelele luboniswe nguBen Heine athe walibiza ngokuba yi 'Pencil vs Camera'. Inkqubo exubileyo ekupheleni kosuku isibonisa umzobo wepensile wenkundla efanayo efotwe kwaye uxutywe ngokuqaqambileyo.
Iifomathi ezintsha kunye nezixhobo zenze indlela yazo Ukuqhekeka ngokuchasene nobugcisa beplastiki ngokwesiNtu. Ukubuyela kwezi ntetho, ndikhumbula omnye woogxa bam owathi oopopayi bendabuko ngekhe badlule kwi-3D kwaye yayingumbandela weentsuku nje. Ngoku uninzi lweefilimu zoopopayi ezenziwe zii-studio ezinkulu zenziwa kwi-3D.
Ngesi sizathu uthotho olwenziwe ngumxube kaHeine oko kungqubana phakathi kwehlabathi ezimbini, enye indala enye intsha. Kwiifoto ezahlukeneyo kunye nemizobo eyahlukeneyo, uxuba iindawo ezahlukileyo ukuvula indibaniselwano enkulu phambi kwethu kwaye adibanise ezi ndlela zimbini zahlukileyo ezidityaniswe kuthotho lwakhe.
Omnye indlela entle yokujoyina Zeziphi iihlabathi ezibini ezahluliweyo kodwa eziphantse zajikeleza ngokufanayo, indalo yobugcisa kunye nomnqweno wokudlulisa imiyalezo nokubalisa amabali.
Unayo UbuGcisa ukusuka kuHeine ukuya landela imisebenzi yabo kwaye ufumane ezinye iziqwenga zokuyila njengalezo zizalisa esi sithuba.
Ukuba uthanda ukufota, yiza apha. Ngokubhekisele kumzobo, esi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umlo weTitans kuthotho lukaPen Heine 'lwePensile vs Ikhamera'